Nkà na ụzụ |
Ọrụ Mmiri Ryokai LED Environmental Lighting and Control
Productdị :dị: Okwu Mmalite na ọrụ na n'ichepụta nke ọkụ gburugburu ebe obibi Ọkụ ọkụ ọkụ n'okpuru mmiri: ofdị ọkụ ọkụ n'okpuru mmiri, na-akwado ọkọlọtọ USITT DMX512 / 1990, ọkwa 16-bit ntụ ntụ, isi awọ ruo 65536, na-eme agba ọkụ ihe siri na nro. B ...
Ikanam ala oriọna Na-ahọrọ ngwaahịa maka oriọna
Ikanam ke ala / recessed ọkụ na-ugbu a n'ọtụtụ ebe na mma nke ogige ntụrụndụ, lawn, n'ámá, ogige, akwa ifuru, na-agafe agafe n'okporo ámá. Agbanyeghị, na ngwa ngwa bara uru, nsogbu dị iche iche mere na ọkụ ọkụ. Nsogbu kasịnụ bụ nsogbu mmiri na-adịghị. Ikanam na grou ...
Kedu otu esi ahọrọ ezigbo ọkụ ọkụ ọkụ
Kedu otu esi ahọrọ ezigbo ọkụ ọkụ ọkụ maka ọkụ ala? Na-eto eto ina ike ịzọpụta na gburugburu ebe obibi-echebe, anyị na-esiwanye eji Ikanam ọkụ maka na ala ìhè imewe. Ikanam ahịa bụ ugbu a bụ a ngwakọta nke azụ na dragon, ọma na ba ...
Dị ka akụkụ dị mkpa nke odida obodo
Dị ka akụkụ dị mkpa nke odida obodo, ọkụ na-enwupụta n'èzí abụghị naanị na-egosi echiche nke ọdịdị ala Usoro ahụ bụkwa akụkụ bụ isi nke usoro mbara igwe nke ọrụ ndị mmadụ na-eme n'èzí n'abalị. Scientific, tozuru etozu, na onye ọrụ-enyi na enyi n'èzí ọdịdị ala dị larịị ...